Tsy handraisana vahiny fotsiny! | NewsMada
Tsy handraisana vahiny fotsiny!
Na mbola tsy nifarana aza ny taona, azo lazaina ho nitondra aim-baovao sy fanantenana ho an’i Madagasikara ity 2019 ity. Ho an’ny mpino kristianina, nomban’Andriamanitra fahasoavana ny Malagasy. Nampiray sy namoha indray ny fitiavan-tanindrazana ny voninahitr’ity Nosy ity, nasandratry ny Barea, ekipam-pirenena malagasy amin’ny taranja baolina kitra, volana vitsy lasa izay.
Tsy izay ihany fa, andro vitsy sisa, higadona eto amintsika ny papa François. Marina fa ny mpino kristianina katolika no tena miandrandra fahasoavana amin’izao fitsidihan’ny solontenan’ny Md Piera eto izao. Na izany aza, ho an’ireo mpino ireo, firariana ny hitobahan’ny fitahiana ho an’ny Malagasy tsivakivolo.
Heverina fa izay, rahateo, ny manosika ny fitondram-panjakana hanomana fatratra ny fitsidihan’ny papa eto amintsika. Mba ho fanajana azy sy ho voninahitry ny Malagasy iray manontolo. Zava-dehibe io fanomanana io: fanamboaran-dalana, fanadiovana tanàna, fiahiana fandriampahalemana, sns. Rehefa lasa mantsy ny vahiny, mijanona ho tombontsoan’ny rehetra izany rehetra izany.
Saingy, na ho an’ny mpitondra na ho an’ny vahoaka entina, heverina fa tsy rehefa ho tonga vahiny ihany vao hamafa trano. Tsy ny mpitsidika ihany mantsy no mila madio sy milamina ary fotodrafitrasa mendrika ny maha olona. Antenaina fa fanombohana ihany izao, izany hoe, mbola hitohy ny fikirizana sy ny ezaka arahina asa. Izany, rahateo, no nifidianan’ny vahoaka ny mpitondra.
Ny vahoaka ihany koa, hahay hanaja ny fananana iombonana. Toe-tsaina izay mbola tsy hita amin’ny ankamaroan’ny Malagasy, izay toa lasa zatra mpanimba ny efa? Manantena fahasoavana ny mpino katolika amin’izao fahatongavan’ny papa izao. Raha izany no miampy firaisankina sy fitiavan-tanindrazana, heverina fa hisy mangirana amin’izay ny handrosoan’ity Nosy ity. Am-bava homana, an-tsaina mieritreritra!